Eyona Itekhnoloji yeNtengiso ibalaseleyo | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Uyilo olucwangcisiweyo: ingqondo
Hayi, andinanto ndingakuthengisela yona. Endaweni yoko, ndifuna ukukukhumbuza ngenyaniso enzulu osenokuba uyilibele: esona sixhobo sinamandla sokuthengisa ishishini lakho ngokufanelekileyo sesele unaso. Yeyona injini ibalaseleyo kwilizwe lonke - ingqondo yakho.
Umnxeba wokusebenzisa i-noggin yakho ngoyena siwuva ngalo lonke ixesha. Yile nto ithethwa ngabazali kunye nootitshala kubantwana, ngabaphathi abaphoxekileyo abathi kubasebenzi kwaye yintoni abathengi abanomsindo abaxelela abathengisi babo. Ke isilumkiso esidala sokuCINGA sinokusinceda njani kwitekhnoloji yokuthengisa? Ukuphendula lo mbuzo, kufuneka sibuyele kwiziseko.
Yintoni ukuThengisa? Yintoni iTekhnoloji?
Nangona Martech Zone igcwele izimvo ezimnandi zokuphucula ukuthengisa kwi-Intanethi kunye neemveliso ezimangalisayo zotshintsho olwandayo, akubangakho ngxoxo ininzi malunga nokuba amagama athi "ukuthengisa" kunye "netekhnoloji" kuthetha. Ukubhala inkcazo yakho yindlela efanelekileyo yokucinga ngokucacileyo. Nantsi into endiyicingayo ngala mazwi:
Marketing Ulungiselelo lwe ulwazi olufanelekileyo malunga neemveliso zakho, iinkonzo kunye nophawu kubaphulaphuli abanokubakho abathengi kunye nabameli.
Technology Ukusetyenziswa kwesayensi kunye nengqiqo kwinkqubo yokuqhuba Ukuphuculwa kwenkqubo kwimveliso.
Njengayo nayiphi na inkcazo, kukho okungakumbi kunombono kunala magama. Kodwa qaphela isicatshulwa endisisebenzisileyo: Intengiso imalunga nelelo, kanti iteknoloji imalunga isicelo. Oko kuthetha ukuba intengiso yinto ekufuneka uyibizile, i-corral kunye nedoli kwindawo elungileyo, apho itekhnoloji ingaphezulu ngokubeka iziqwenga ndawonye.
Ngokwenkcazo yam, i Jolise yentengiso yahluke kakhulu kunogqaliso lwetekhnoloji. Kuya kufuneka sisebenzise ukuthengisa njengendlela yokufikelela kubathengi abanokubakho kunye nabameli. Kodwa itekhnoloji kufanele ukuba ikhokelele kuphuculo olunokulinganiswa ngokusebenzisa inkqubo.
Xa sidibanisa la magama mabini, itekhnoloji yokuthengisa kufuneka ijolise kubaphulaphuli kwaye ngokucwangcisiweyo. Ngale ngcinga, uninzi lweenzame zethu zeshishini ziya kugxila ngokuqaqambileyo. Ngokujonga nje ukuba imisebenzi yethu ihambelana njani neenkcazo zethu, sinokufumana isizathu sokuba kutheni iinzame zethu zetekhnoloji yokuthengisa zinokuphumelela okanye zisilele.
Iinkqubo ezilungileyo, abaphulaphuli abangalunganga
Ngaba uskena onke amakhadi eshishini ongena kwi-imeyile yakho yentengiso kwaye uqalise ukuyithumela imiyalezo kwangoko? Ukuba kunjalo, oko kuthetha ukuba unenkqubo emnandi yokuqhubekeka amakhadi eshishini. Kodwa ndibheja ukuba amaxabiso akho avulekileyo asezantsi kwaye uhlala ungabhalisi. Kungenxa yokuba lonke ikhadi leshishini olifumanayo mhlawumbi ayi umele abaphulaphuli abafanelekileyo kwimveliso yakho. Usebenzisa isixhobo esikhulu kodwa nabantu abangalunganga.
Abaphulaphuli abalungileyo, akukho nkqubo
Ngaba uya kwiminxeba yokuthengisa emnandi kunye nabagqatswa abomeleleyo kodwa ulibale ukulandela? Kuya kufuneka wenze urhwebo olugqwesileyo ukuze ufumane abo bantu, nokuba kungenxa yenethiwekhi, intengiso okanye eminye imithombo. Kodwa ukuba awukhathaleli ngokwenza umnxeba olandelayo ukuvala isivumelwano, awunayo inkqubo yokuthengisa ethembekileyo. Olona khokelo lukhulu emhlabeni alunantsingiselo ukuba awuzange utyikitye isivumelwano.
Ixesha lePuzzle Quiz
Nazi ezinye iintsilelo kwitekhnoloji yokuthengisa endikhe ndayifumana kule veki iphelileyo. Kulula ukubona ukuba kutheni benengxaki. Jonga ukuba ungafumanisa ukuba yeyiphi na intsilelo ebangele ingxaki. (Khetha okubhaliweyo phakathi kwendiyayithanda lento] kwimpendulo.)
Ukhuphe iflaya yomnyadala ozayo wokuthetha, kodwa awubandakanyanga indawo [ukusilela kobuchwephesha obusezantsi: ufuna uluhlu lokutshekisha ekwenzeni iiflaya]
Undinike ikhadi leshishini lenkampani yakho yentengiso yelizwe lonke, kodwa idilesi yemeyile yakho ineHotmail [Ukusilela kwintengiso: ucinga ukuba abaphulaphuli bakho abazi / abakhathali ngegama lokwenyani lesizinda]
I-voicemail yakho enye ibuza imibuzo emibini: Ngaba ndiyivile inkonzo yakho? Okanye, sele ndililungu elinemibuzo malunga nalo? [Ukungaphumeleli kwintengiso: udibanise abaphulaphuli abahlukeneyo ngokupheleleyo kwintengiso enye]
Kumsitho wonxibelelwano, uthembisa ngokundithumela ulwazi kamva ngalo olo suku kodwa ungalubhali phantsi. Andizange ndive kuwe. ukusilela kobuchwephesha: awunayo ipatheni yamaxwebhu]
UAlbert Einstein uxelelwa ukuba wayekhe wathi "Iingxaki ezibalulekileyo esijamelana nazo azinakuconjululwa ngumgangatho ofanayo wokucinga owazidalayo." Ukuba ufuna ukusombulula iingxaki zakho zetekhnoloji yentengiso, buyela kwiziseko zokucinga ngokucacileyo. Vavanya iinkcazo zakho. Chaza into oyenzayo engalunganga ukuze uqalise ukwenza izinto ngokuchanekileyo.
tags: eyona teknolojingengqondoTechnology
Amandla oMntu kuThengiso lwe-imeyile
Feb 24, 2010 ngo-3: 56 PM
Kwakhona ndikwisivumelwano esingapheliyo noRobby.
Xa ndifunda ezi zithuba, ndihlala ndicinga ngendlela endinokuzisebenzisa ngayo ukuzithengisa, kwaye ngokuchaseneyo
UJon D. Speer
Mar 4, 2010 ngo 11:46 PM
Umsebenzi omkhulu usibuyisela kwiziseko!